April 2017 – siifsiin
Utuuf eegeen dugda duuba deemti Jechuun mammaakamti Utuun kun maalumaa waanuma akkamiitii? Haata’u iyyuu malee maali faayidaansaa? Maaluma fakkaataa akkami bifnisaa? Diimaa gurraachamoo adii magariisaa? Waan akka Aannanii dhugamee nama qabbaneessu? Moo waan alanfatamu? Yookaan midhaan ta’ee beelaaf kan nyaatamu Utuun uffatamoo kan uffatanii ittiin miidhagani Moo akka muka odaa jala taa’anii kan itti boqotani … Continue reading Utuu!
Taati laata Dhugaa?
Farda kee fe’attee Yaada koo geejjibdee Kaafattee guluftee Fuutee biyyaa baatee Naan joortee jaawwartee Ana naan jaakartee Dammaqee ol jennaan Abjuun abjuu taatee Abjuun dhugaa taatee Dhugaan abjuu taatee Qalbiin koo rarraatee Mara … Continue reading Taati laata Dhugaa?